Ruushka oo Saldhig Militari ka Dhisaynaya Somaliland – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ruushka oo Saldhig Militari ka Dhisaynaya Somaliland
Sida laga soo xigtay waaxda gaashaandhigga Mareykanka, Ruushku waxay qorsheynayaan saldhigooda milatari dekeda magaalada Berbera ee xeebaha dowlada iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland, waa sida ay hadal u qoreene
Shiinaha iyo Mareykanka waxay saldhigyo millatari ku leeyihiin Jabuuti sidaas darteed waxay wadaagi doonaan isla xeebta haddii Ruushku saldhig ka dhiso dekada Berbera.
Ruushka ayaa sidoo kale muujiyay daneynta ah in saldhig militari iyo xarun logistic laga sameeyo Eritrea laakiin faahfaahinta ku saabsan wadahadalada ayaa wali ah mid sii yaraanaya.
Diyaaradaha gaashaaman ee milatariga Ruushka ayaa ka soo degay Gobolka Cabo Delgado ee waqooyiga Mozambique, oo qiyaastii 1,500 mayl koonfur ka xigta, xeebta bari ee qaaradda Afrika. Sida laga soo xigtay Waaxda Difaaca Mareykanka, ilaa 160 shaqaale oo ka tirsan kooxda Wagner, qandaraasle militari oo gaar ah oo Ruush ah ayaa la geeyay.
Marar kale, Dowlada Mozambique waxay dooneysay adeegyo adoonsiyiin Ruush ah si ay uga caawiso la dagaalanka kacdoonka sii kordhaya ee ay sheegatay inay xiriir la leedahay Dowladda Islaamka.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay si dhaw ula soconayso dekada magaalada Berbera ee Somaliland oo saldhig militari u ah.
Daabacaad ay daabacday The New-York Times toddobaadkan ayaa lagu sheegay in xiisaha joogtada ah ee Ruushka u qabo Afrika uu walwal badan ka qabo reer Galbeedka.
Saraakiisha waaxda gaashaandhigga mareykanka ayaa falanqeeyey talaabada Moscow ee muujineysa awooda awooda weyn iyo in ay walaac ka muujinayaan saameynta sii kordheysa ee Russia ee qaarada Afrika. Mareykanka ayaa sidoo kale wajahaya tartan la mid ah midka ka socda Shiinaha iyada oo Washington ay la halgameyso sidii ay u dhisi lahayd amnigeeda iyo himilooyinkeeda dhaqaale ee Afrika.
Ololahan saameynta ah ee Afrika ay ku leedahay door weyn xitaa iyadoo Mareykanka uu ka dhawaajiyey inuu boqolaal ciidan ah ka kaxeeyo Galbeedka Afrika iyada oo ujeeddadeedu tahay inay u daadgureyso sidii looga hortagi lahaa hanjabaadaha Shiinaha iyo Ruushka ee ku dhow xuduudahooda.
Xigasho Africatodaynewsonline.com waxaad ka eegi kartaa warbixinta oo english ah click halkank
MACLUUMAAD DHAMAYSTIRAN OO KU SAABSAN ALAABTI XALAY CIRKA SOCOTAY oo lagu...